काठमाडौं । नेपालका लागि बेलायतका पूर्वराजदूत रिचर्ड मोरिसको शव सोमबार फेला परेको छ । आफ्नो
स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै जापानी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, नेपालले के सिक्न सक्छ ?
काठमाडौं । जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफ्नो
गृहमन्त्रीको टोलीले धानबाली माडेकै हो? तस्बिरले यसरी झुक्यायो मिडियालाई !
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको टोलीले शुक्रबार अछामको बाढीप्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण ग¥यो । मंगलबार
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको पहिलो दिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । प्रशासनले अत्यावश्यक